Diyaarad - Wikipedia
Diyaarad ama Dayuurad () waa nooc ka mid ah gaadiidka cirka, kaas oo ah aalad labo garab oo marwaxado ku xidhan yihiin kana samaysan bir, jaandi, muraayad iyo walxo kale taas oo dad ama alaab u qaada goobo kala duwan oo dunida ah.
Diyaaraduhu waxay leeyihiin naqshado, xajmi, garbo iyo qaab dhismeed kala duwan. Qaar aad ayay u waaweyn yihiin, halka qaar xajmi yar yihiin. Kuwo kale aad ayay u dheereeyaan, qaarna xawaarahoodu wuu hooseeyaa.
Diyaaradaha inta ugu badan waxay leeyihiin Darawal (pilot), kaas oo ah qofka hogaaminaya diyaarada. Laakiin waxaa jira noocyo laga hago kombuyuutarka oo aanay cidi wadin.
Diyaaradu waxay ka mid tahay gaadiidka bani-adamku isticmaalo tan ugu dheereeysa ama socodka badan, sidoo kale waxay ka mid tahay kuwa ugu halista iyo khatarta badan.
2 Liiska Diyaaradaha Soomaaliya
Mid ka mid ah Diyaaradihii ugu horeeyay ee la sameeyo.
Fikrada ah in hawoda lagu dhex safro ma ahan mid wakhti dhow bilaabantey. Waxaa taariikhdu sheegtaa in qiyaastii 400 sanno (Nebi Ciise hortii) oo ah wakhti hada laga joogo in ka badan 2400 oo sanno la sameeyay aalad duuli karta hawoda taas oo u qaab eekayd Shimbirta.
Sidoo kale qarnigii sagaalaad ayaa dowladii Islamka ee Cabaasiyiinta isku dayeen ineey sameeyaan aalad hawoda dhex mari karta.
Isku soo wada duubo, Diyaarad rakaab iyo bagaash qaada isla markaana la maamuli karo una naqshad dhow nooca aan naqaano maanta, ayaa dadaalo badan iyo isku-day badan ka dib, sanadkii 1896 ayaa farsamo-yaqaan Jarmal ah Otto Lilienthal wuxuu sameeyay diyaarad dhamaystiran oo u qaab dhow nooca aan maanta naqaano.
RSM Air Somalia 2001
D3 DAO Daallo Airlines 1991
6J JBW Jubba 1998
. Jubba Airways https://web.archive.org/web/20140202133148/http://centreforaviation.com/profiles/airlines/jubba-airways-6j. Waxaa laga kaydiyay the original February 2, 2014. Soo qaatay 22 January 2014. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Diyaarad&oldid=163041"
Last edited on 19 Oktoobar 2016, at 07:14
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Oktoobar 2016, marka ee eheed 07:14.